Video isonyere bụ akụkụ dị mkpa nke video edezi. E nwere ọnụ ọgụgụ nke software na i nwere ike iji nweta ihe mkpachapụ nke gị faịlụ n'ụzọ dị otú a. N'okpuru ebe a bụ ise ndị kasị ewu ewu MPEG Video joiners.
Nke a bụ a video isonyere freeware na-na-eme dị ka a GUI nke ndị ọzọ na ngwá ọrụ dị ka flvtool na MpgTx nke aka video edezi ọrụ nke software. The software-enyere gị aka kewaa faịlụ dị ka ndị na WMV, RM, mpg na FLV formats na mgbe ahụ ha sonyere ha azụ ọnụ. Ọ na-enye nza nke keyboard mkpirisi ụzọ.
Na-enye ngwa ngwa arụmọrụ dabere na faịlụ nha;
Nwere ike ịbịa na chọrọ maka gị usoro inwe Windows Media Player.
Nke a free isonyere software akwado ndị dị otú ahụ formats dị ka MPEG-1, MPEG2, WMV, MP3, AVI, OGG, WAV na WMA. N'ịbanye faịlụ dị mfe dị ka na-ahọpụta ha na a usoro na-ahọpụta ụdị nke media nakwa dị ka mmepụta usoro. All ị ahụ chọrọ ime bụ ezipụta mkpakọ codecs ma ọ bụ video profaịlụ dabere na gị mkpa.
Na-enye ihe ngwọta maka isonyere ọdịyo na vidiyo faịlụ;
Nwere ihe dị mfe ọrụ interface.
Nwere ike ọ gaghị arụ ọrụ na Windows 7 na Vista.
Files nwere ike mfe-kewaa na n'ime ngalaba, zitere n'elu internet na mgbe ahụ mesịrị sonyere ọzọ. Ọ bụkwa dị na nsụgharị ndị ọzọ maka ojiji na OS bụ dị ka Mac na Linus. N'ihi ya, ọbụna ma ọ bụrụ na ị kewaa faịlụ na a Windows igwe, i nwere ike inwe iji sonyere ya na a Mac. A 10GB faịlụ nwere ike kewaa 600MB edere.
Video toolbox nwere ịtụnanya video ngwá ọrụ na bụ ihe online freeware. Iji jiri ngwaọrụ mgbati nke gị video faịlụ, ị ga-mkpa aha. Ị nwere ike iji a URL ejikọta faịlụ ma ọ bụ nanị bulite si diski ike. Mgbe ahụ, ị ​​nwere ike mfe sonyere gị videos ọnụ.
Mfe iso video Nkuzi na-eduzi gị.
Ọ bụrụ na ị chọrọ kewaa gị faịlụ, ọ na-akawanye mfe dị ka ị nanị mkpa họrọ faịlụ, setịpụrụ clipping nso na Ngụọge na ị dị njikere na-aga. Na merging nke faịlụ, ị nwere ọtụtụ nhọrọ ma ọ bụrụ na ị chọrọ ịgbanwe ma ndị size nakwa dị ka usoro nke mmepụta.
Ọ bụrụ na ị chọrọ a ọzọ ndị ọkachamara MPEG video joiner, Wondershare Filmora (mbụ Wondershare Video Editor) ukwuu tụrụ aro. The ike video ọnwụ ọrụ na-enye ohere unu sonyere niile ewu video formats gụnyere MPEG video faịlụ. E wezụga, ị nwekwara ike itinye ndị ọzọ video mmetụta dị ka amasị gị.
Olee otú iji tọghata AVI ka MPEG-2